Cricket - Part 104
Cricket World Cup 2015 Quiz No. 13 Questions
1) Who scored 49 runs off 49 balls and took six catches for Pakistan against South Africa on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
b) Rahat Ali
d) Umar Akmal
2) How many runs did Pakistan score against South Africa on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
3) According to Duckworth/Lewis rules how many runs South Africa had to score to win against Pakistan on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
4) How many overs did South Africa bat against Pakistan on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
5) Where was the Ireland versus Zimbabwe match on 7/3/2015 of Cricket World Cup 2015 held?
6) Who scored 112 runs off 103 balls for Ireland against Zimbabwe on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
a) Edmund Christopher Joyce
b) Gary Wilson
c) William Porterfield
7) Who scored 121 runs off 91 balls for Zimbabwe against Ireland on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
a) Craig Ervine
b) Brendan Taylor
c) Tendai Chatara
d) Tawanda Mupariwa
8) Who caught Sean Williams on 96 off Kevin O’Brien near the boundary on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
a) Paul Stirling
c) A. Balbirnie
d) John Mooney
9) Who took last two wickets of Zimbabwe in the last over of the match on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
a) A. McBrine
b) Alex Cusack
10) By how many runs did Ireland defeat Zimbabwe on 7/3/2015 in Cricket World Cup 2015?
Cricket World Cup 2015 Quiz No. 13 Questions with Answers